Ukholifulawa kunye nekhrim yekhrimu | Ukupheka kweKhitshi
Ukholifulawa kunye nekhrim ekhrimu
UMaria vazquez | | Iiresiphi zemifuno
Uyayikhumbula iresiphi ebesiyilungiselele izolo? Ye Ikholifulawa kunye nesaladi yomnqatha ngeapile Wacebisa ntoni njengokugcwaliswa kweesendwitshi kunye nesandwich? Namhlanje sisebenzisa esinye isiqingatha sekholifulawa ukulungiselela ikrimu elula, efanelekileyo ukukhonza kwisidlo sangokuhlwa. A Ikholifulawa kunye nekhrim, Imnandi.
Ukuziqhelanisa neli phepha sele ziyazi into endiyicingayo malunga neekhrim: zibonakala ngathi zi isixhobo esikhulu sokugqibezela isidlo sangokuhlwa. Zilula kakhulu kwaye ziyakhawuleza ukuzilungiselela, ngaphandle kwezabelo ogqiba ukuzenza. Ikholifulawa kunye nekhrimu yokhrimu esiyenzayo namhlanje ayizukukhetha, yizame!
Ukuba uyayithanda ikhari uyayithanda le khrimu. Ukuba awuqhelanga ukusebenzisa esi siqholo, nangona kunjalo, unokufuna ukongeza kancinci kunenani elibonisiweyo kwiresiphi. Ukongeza ngaphezulu, kuya kuhlala kunexesha! Ungayikhonza njengoko injalo okanye Yikhaphe kunye namanye amantshontsho e-crispy okanye ukunyusa okunesondlo kancinci.
Le kholifulawa kunye nekhrimu yekhrimu ilungile ukugqibezela izidlo zakho zemihla ngemihla. Ikrimu elula nekhawulezayo ukuyilungisa kodwa ine-flavour eninzi.
½ icauliflower ngaphandle kwesiqu
1 ithisipuni ikhari
⅓ itispuni yetyuwa
Iiglasi ezi-2 zomhluzi wemifuno okanye amanzi
Gweba itswele kunye negalikhi.
Sitshisa ioyile epanini kwaye susa i-anyanisi kunye negalikhi de kube yeyokuqala idlulile.
Emva koko yongeza ukholifulawa kwiifreythi ezincinci kwaye upheke kude kube mnyama.
Ke sidibanisa iziqholo kwaye uxube.
Emva koko, sithulula iiglasi ezimbini zamanzi okanye umhluzi wemifuno -emele igubungele imifuno egungxayo- kwaye pheka imizuzu eli-10.
Emva kwemizuzu eli-10, tyumza ukhonze ikholifulawa kunye nekhrim yekhrim, eshushu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi zemifuno » Ukholifulawa kunye nekhrim ekhrimu
Ipasta enesipinatshi kunye netshizi yesosi
Ikholifulawa kunye nesaladi yomnqatha ngeapile